Te hiaraka maharitra ? Mahaiza mamilafila !
Marobe ny fiarahana miforona ao anatin’ny alin’ny faran’ny taona. Tsy lavina fa mety mifanojo ny fo anankiroa samy tia, dia tafatambatra ho iray, saingy maro ihany koa ny fiarahana mandalo fotsiny, ateraky ny ambiansy,
ny fiarahana mandihy, ny zava-pisotro misy alikaola… Amin’ny ankapobeny dia ireo vehivavy mora baboina no manorina fiarahana ao anaty alim-pandihizana, toy izay mitranga amin’ny faran’ny taona. Tsy mila “mikôty” ela akory mantsy ny lehilahy dia “mahazaka” azy...
"Fille facile" no isokajiantsika azy ireny, izany hoe : mora azo ny fony... sy ny zavatra hafa koa ! Tsy mihafahafa izy ary tsy miandry ela, tsy mamilafila fa rehefa mahafinaritra azy dia iarahany. Mazava ho azy fa ratsy fijery azy ireny ny fiarahamonina. Indraindray anefa dia velom-pialonana azy ireny ihany ny vehivavy mipetrapetraka, indrindra raha tokan-tena. Nahoana tokoa no ifandrotehan'ny lehilahy ny vehivavy toy izany, nefa ianao ilay mba mendrika amin'ny lafiny rehetra, toa tsy misy mijery ?!
Mahafinaritra ny lehilahy tokoa ny miaraka amin'ny vehivavy mora azo. Ilay izy tsy mivaky loha sy tsy mieritreritra ela no tena manintona aminy. Raha anjoria (aventure) miserana no tadiavina, dia izy ireny no tena idealy. Mahay mihomehy sy mifaly koa mantsy ireny karazam-behivavy ireny, ka namana mahafinaritra, raha te hiala voly. Izany koa anefa no mahatonga ny vehivavy mora azo ho tsy manana olon-tiana maharitra. Ataon'ny lehilahy fandalovana fotsiny izy, ka lasa miovaova olona iarahana matetika. Mety mba mitady fiarahana maharitra ihany izy, saingy ny lehilahy mihitsy no mihevitra azy ho tsy matotra sy tsy azo antoka.
Ilaina ny mamilafila
Araka izany, raha tena te hiaina fiainam-pitiavana maharitra dia aleo mahay milalao ny familafilana. Toy ny fifaninana mantsy ny fambaboana vehivavy, eo amin'ny lehilahy, ka mila mahatsapa ilay fientanentaana izy hoe : ho babo ihany sa tsia ? Sady izay nandaniana ron-doha sy nandreraka ihany koa no tena tsapa ho mamy sy sarobidy rehefa azo. Manana ny hasiny eo anatrehan'ny lehilahy kokoa, noho izany, ny vehivavy raha tsy mora azo loatra. Amin’izao faran’ny taona izao ary, dia tsy maninona mihitsy ny miezaka maka ny fon’ny olona izay mampitsiriritra, saingy mahaiza mampifilafila, raha tiana ho fiarahana maharitra ilay izy, fa tsy fiarahana hanaperana ny taona fotsiny.